PSJTV | माधव नेपाललाई प्रश्न : अब तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
पछिल्लो समय नेकपाका वरिष्ठ नेता पार्टीमा एक्लिँदै गएका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको मनमुटाव बढ्दै गएको छ।
यसै विषयमा नेता नेपालसँग गरेको कुराकानी आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ। त्यसको एक अंश :
पार्टीमा यत्रो मनमुटाव देखिन थालेको छ, अब तपाईं कसरी जानुहुन्छ?
सहमतिबाटै जानुपर्छ। छलफलबाट मिलाएरै अगाडि लैजानुपर्छ। पार्टीमा छलफल, बहस त भई नै रहन्छन् नि ! आज मात्र होइन, मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने २०३१ सालदेखि विवाद हुँदै आएको छ। त्यस्ता विवाद तपाईंहरूका निम्ति नयाँ लाग्न सक्छ। मैले ४६ वर्षदेखि नै बेहोर्दै आएको छु।
सी चढ्ने विमानले सातवटा जेट अट्ने ठाउँ ओगट्ने !
सरकारले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका अवसरमा यही असोज २६ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ–संस्था र निकाय, शिक्षण ...